Lymph amanzi (i-lymph) massage - inqubo kuvusa ukunyakaza lymph ngomzimba. Indlela yokuqala kuchazwa-1930.
Imiphumela ezivezwa Rhythmic ukuwabhulasha kwesikhumba futhi zamanzi. Isigaba sokuqala sesikhululiwe emikhawulweni proximal, bese distal. Ubude imayelana ihora. Inqubo siqukethe kokwenza ngokucophelela massage ukunyakaza, lapho ingcindezi emzimbeni akufanele bube ngaphezu kwamashumi amane mmHg.
Le nqubo kwenza kube nokwenzeka ukuba ukusheshisa ukunyakaza eliphezulu yamangqamuzana amaprotheni nesisindo mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi we-capillary (lymph), ngesikhathi esifanayo kuvusa ukusikwa limfososudov. Ngenxa yalokho, massage lymph kwandisa lymph ukugeleza ngokusebenzisa collaterals ezitsheni plexus ongama.
Masseur izenzo ngqo isikhumba, oxhumana naye akufanele kuvele phakathi iminwe emphethweni isikhumba. Ukuwabhulasha kwenziwa isiqondiso zamanje lymph. Inqubo Ukwenza kancane, ngesilinganiso esingeqile 10 ukunyakaza ngomzuzu.
massage lymph anezinye Izimo. Izinqubo kungavunyelwe Izifo ukuvuvukala isikhumba, fliktenah, izilonda trophic, komdlavuza. Kuyinto engenakwenzeka uhlikihla ngaphansi encishisiwe lwemithambo igazi ligeleze emikhawulweni, isifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, endarteritis.
Nokho, massage lymph has izikhathi eziningi ezinhle. Okokuqala, kukhona ukukhululwa lamaseli kusukela imikhiqizo umzimba kwamazinyo. Inqubo kusiza umsebenzi wonke amaseli, okwandisa izinga lokugayeka kokudla emzimbeni, futhi kanjalo kuyashesha izinqubo yokunciphisa isisindo okweqile.
Ngenxa yalokho, ngokushesha ama-lymph ukugeleza yanda ngokuhlanza umzimba ubuthi, imikhiqizo esibolile, okuvumela izicubu kanye izitho eside futhi uyogcwala mpilo nezakhi eziwusizo. massage lymph ikuvumela ukuba balahle ngokweqile uketshezi interstitial, okuyinto yezimbangela futhi zokubonisa cellulite.
Lapho efeza nezinqubo indwangu kangcono wageza ubalekela ngokushesha ukuvuvukala nokuvuvukala zibuyiselwe evamile isakhiwo enempilo kwemisipha izicubu, izicubu ongama. Le ndoda liqala ukubonakala likhanga futhi bobusha.
Buciko massage, somNyango wezeMpilo kumele izandla kuqala okudambisa izinhlungu zibe kanye uhlobo phezu umzimba, bese umphumela wawo wathuthela kwezicubu ukujula, ngaleyo ndlela kuncishiswe imithelela ukucindezeleka nokukhathazeka. Kwaba kuphela esigabeni sokugcina, uzotshala kohlelo lymph.
Massage amasu , bangase abulawe yayo eziningana ezahlukene, kodwa noma kunjalo inqubo kumele kwenziwe i uchwepheshe nakho uyakucabangela izitho zomzimba kanye anatomy nje kokuthi isistimu lymph kanye nezinye amayunithi umzimba.
Kuyoba usizo lymph amanzi massage sezinyawo kubantu abaphethwe varicose emithanjeni, edema syndrome, ngoba lezi zifo ahambisana ukubambezeleka emikhawulweni engezansi amanzi womuntu lymph. Izinqubo e eziyinkimbinkimbi elisetshenziswa nekusetjentiswa kwetinhlelo umzimba ekubumbeni futhi kwesisindo, ikakhulukazi ekwelapheni amafomu edematous ka cellulite. Kulokhu kukhona ukukhululwa kwe -lymph, okuyinto ziya onomfutho amaseli fat evuvukele.
Lihambisana amathekhiniki ezihlukahlukene ukuncipha massage lymph unika ephelele umphumela kahle, kususa kusukela imikhiqizo umzimba umzimba kwakheka cleavage fat, ukwenza ngcono amanzi umsebenzi.
Ukufeza umphumela ohlala njalo, izinga ukuqaliswa edingekayo ukwelashwa 12 nge imvamisa 2-3 ukubhucungwa ngeliviki.
Kungani amazinyo abuhlungu kusuka kumnandi?
I amathiphu ebaluleke kakhulu esitolo abathengi
Ikotishi ingaphakathi - amabutho yimuphi